5 Aaladood oo Ku Hormarin Doonta Natiijooyinkaaga Ka Soo Bixitaanka Blogging | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 11, 2014 Khamiis, Maarso 4, 2021 Ian Cleary
Balooggu wuxuu noqon karaa isha weyn ee taraafikada boggaaga, laakiin waa waqti qaadasho si loo abuuro qoraallo maqaal ah oo had iyo jeer ma helno natiijooyinka aan dooneyno. Markaad blog sameyso, waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad ka heshay qiimaha ugu badan.
Maqaalkan, waxaan ku soo bandhignay 5 qalab oo gacan ka geysan doona hagaajinta natiijooyinkaaga qorista, taasoo horseedi doonta taraafikada badan iyo, ugu dambeyn, iibka.
1. Abuur Sawirkaaga adoo adeegsanaya Canva
Sawir ayaa soo jiita dareenkaaga oo haddii aadan soo jiidan dareenka dadka soo booqda bartaada ma akhriyi doonaan. Laakiin abuurista rafcaan qaadasho, sawirro xirfadlayaal u eg ayaa aad u dhib badan oo waqti badan ku qaadanaya, haddii aad caawimaad khabiir ah ka hesho, waa qaali!
Canva waa qalabka naqshadeynta garaafka taasi waxay u suurta galisaa dadka ugu khibrada yar uguna hal abuurka badan inay soo saaraan sawiro iyagoon ubaahanayn xirfadaha naqshadeynta garaafka.
Mar alla markii aad doorato nooca sawirka aad rabto inaad abuurto (Facebook post, Pinterest pin, blog graphic) waxaad ka dooran kartaa maktabadda naqshadeynta xirfadeed oo dhowr jeer uun isbeddel lagu sameyn karaa si loo waafajiyo qaabkaaga iyo baahiyahaaga.
Si fudud u soo jiido oo ku dheji sawiradaada la soo raray naqshadda (ama ka soo xusho maktabadda ballaadhan ee sawirada kaydka ah), mari miirayaasha indhaha qabanaya, ku dul dhig qoraalka iyo walxaha kale ee garaafka ah, iyo waxyaabo kaloo badan.
Xullo naqshad kadibna qaabee sawirada, midabada, iyo qoraalka
Qoraal kasta oo blog ah hubi inaad haysato ugu yaraan hal sawir oo soo jiidan kara akhristahaaga. Isku-xirka fudud ee adeegsadaha ee Canva waa fududahay inuu maamulo adiga oo kuu suurta gelinaya inaad sameyso sawirro indho-qabad leh oo loogu talagalay qoraaladaada blog daqiiqado gudahood. Markaad wakhti la qaadato Canva, waxaad la yaabi doontaa sida aad waligaa ugu badbaaday la'aanteed.
2. Baadhitaan ku samee Tartamayaashaada adoo adeegsanaya Xeebaha
La imaanshaha fikradaha qoraallada ayaa kugu filan laakiin ogaanshaha kuwa kuu keenaya taraafikada way adkaan kartaa. Ogaanshaha waxa u shaqeynaya tartamayaashaada waxay ku siin karaan aragtiyo iyo fikrado qiimo leh bartaada.
Isticmaalka Xeebaha waxaad ku geli kartaa cinwaanka websaydhka tartamayaashaada oo waxaad arki kartaa liistada ereyada ugu muhiimsan ee ay hadda u taagan yihiin Google. Waxaad arki kartaa ereyada muhiimka ah, raadinta la qiyaasay ee ereyadaas muhiimka ah iyo waxyaabo kaloo badan.
Haddii qofka kula tartamaya uu helayo taraafikada ereyadan furaha ah waxaa laga yaabaa inay jirto fursad lagu qoro nuxur lagu bartilmaameedsanayo ereyadaas furaha ah sidaa darteed waxaad qaadan kartaa qaar ka mid ah tartamayaashaada taraafikada!
Laakiin xusuusnow, tani kuma saabsana inaad nuqul ka sameysato qofka kula tartamaya. Waad ku abuuri kartaa maqaalkaaga hareeraha ereyada muhiimka ah laakiin waxyaabaha ku jira waa inay ka duwan yihiin. Waxaad dooneysaa inaad qorto maqaal aad uga fiican kan kula tartamaya oo aad horumariso. Iyada oo xoogaa baadhitaan lagu wado Xeebaha wax badan ayaad ka baran doontaa tartamayaashaada tani waxay kaa caawin doontaa inaad natiijooyin badan ku gaarto bartaada wax lagu qoro.
3. Kordhi Qiimaha Beddelka ee Diiwaangelinta Email adoo isticmaalaya Exit Intent popup
Haddii aad rabto inaad u dhisto dhagaystayaal socda blogga liiska emailka ayaa aad muhiim u ah. Laakiin way sii adkaanaysaa inaad soo jiidato dareenka websaydhkaaga ku soo booqda oo aad ku qanciso inay isdiiwaan geliyaan ama ay ku biiraan emailkaaga iyaga beddela.
Hab weyn oo lagu soo jiito dareenkooda ayaa ah sanduuq gujis ah oo weydiisanaya cinwaanka emaylkooda. Laakiin sanduuqyada soo baxa ayaa noqon kara kuwo soo dhex gala oo sababa xanaaq inta aad booqaneyso degel internet ah.
Hab hagaagsan oo wax ku ool ah oo ku xeeran arrintan ayaa ah adeegsiga soo-bixid ujeeddo ka bax ah, taas oo ogaanaysa goorta aad ka baxayso goobta oo markaa kaliya ay muujineyso soo-baxa. Waad daalacaneysaa goobta saacado waxna ma dhacaan laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aad isugu daydo inaad uga baxdo degelka ayaa soo muuqan doona.
OptinMonster waa aalad aad u faa'iido badan oo WordPress ah oo taageerta soo-kabasho leh ula-jeeddo bixitaan. Beddelka OptinMonster waa Sumome taas oo aan kaliya laga heli karin WordPress laakiin sidoo kale loo isticmaali karo barnaamijyada kale.
4. Hirgelinta Ikhtiyaarrada Wadaagista Wanaagsan
Marka booqdayaashu ka helaan waxyaabaha ku jira bartaada oo waxtar u leh dhagaystayaashooda waxaad dooneysaa inaad u fududeyso iyaga inay wadaagaan. Tan macnaheedu waa inaad la wadaagto astaamo si muuqata uga muuqda websaydhkaaga, markaa marka niyadu qaadato, waa uun guji.
Dabku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto baararka wadaagista toosan iyo toosan qoraaladaada. Intii aad hoos ugu sii socotey boostada ayaa walxood wadaagga waligood muuqdaan. Dhawaan waxay ku darreen si ka wanaagsan Analytics Kusoo dhawow madasha si aad hada u aragto qoraalada hela saamiyada ugu badan marka la barbar dhigo booqashooyinka. yaa ah saamileyaasha muhiimka ah ee wadaagaya qoraaladaada, iyo inbadan.
Waxay sidoo kale runtii leeyihiin wadaag wadaag saaxiibtinimo leh oo loogu talagalay dadka isticmaala mobilada.
Wadaagida qalabka mobiilku wuxuu noqonayaa mid aad muhiim u ah laakiin waxaad u baahan tahay inaad hubiso inay fududahay in la wadaago.
5. La wadaag Macluumaadkaagii Hore Buffer
Badanaa, waxaan diiradda saareynaa dhiirrigelinta waxyaabahayaga cusub oo aan iska ilaawnaa qaddarka ballaaran ee aan horay ugu haysannay degelkeenna oo weli ah mid waxtar leh oo qiimo leh. Haddii aad leedahay waxyaabo weligood cagaaran (nuxur aan taariikhda ka dhicin) markaa maxaad si joogto ah ugula wadaagaysaa.
Kuwani waa noocyada ugu fiican ee dhajinta si loo diyaariyo loona qorsheeyo horay iyo Kaydka waa qalab weyn oo lagu maareeyo tan. Marka hore, waxaad qeexaysaa waqtiyada aad rabto inaad ku dhejiso cusbooneysiinta kanaalkaaga bulshada (Facebook, Twitter) ka dibna waxaad si fudud ugu dartaa qoraallada safkaaga diyaar u ah in lala wadaago waqtiga soo socda ee la heli karo. Qalab dhameystiraya Buffer waa Bulkbuffer kaas oo awood kuu siinaya inaad ku diyaariso dhammaan qoraaladaada xaashiyaha kadibna aad u soo dhoofiso Buffer si toos ah loogu daro safka.
Xullo waxyaabaha ku jira bartaada ee weli khuseeya oo abuuro xaashida macluumaadka ku saabsan cusbooneysiinta aad rabto inaad wadaagto, kuna soo dhoofso Buffer si sahlan oo toos ah loola wadaago
Balooggaagu waa hanti muhiim u ah ganacsigaaga iyo inaad maal gashato wakhti aad si weyn ugu horumarin karto natiijooyinka balooggaaga. Qodobkaan waxaan ku soo bandhignay 5 qaab oo aad sidan ku sameyn karto. Midkee ayaad hirgelin doontaa? Ma haysaa wax aad jeclaan lahayd inaad ku darto?
Nov 13, 2014 at 2: 17 AM
Yups… baloog garaynta ayaa ah aaladda gaarka ah ee lagu helo natiijooyinka soo ifbaxaya. Shaki la'aan, waa heshiis weyn in la qoro baloog cajiib ah .Laakiin haddii ay ku guuldareysato inay soo jiito dareenka, markaa dadaalladaada oo dhami waxtar ma leh. Way fiicnaan doontaa in xoogaa dadaal iyo waqti yar la geliyo baloogga si loo helo dad badan oo isugu soo urura waxyaabahaaga qoran.
Qalabkan, haddii si caqli-gal ah loo isticmaalo wuxuu noqon doonaa mid miro dhal badan. Gaar ahaan kuwa bilowga ah iyo dadka aan khibrada lahayn, qalabkani wuxuu u dhaqmaa sidii nasiib.
Marka, aad baad ugu mahadsantahay sida aad nooga dhigtay inaan ka warqabno qalabkan si aan ugu qabanno shaqo caqli gal ah helitaanka fiiro gaar ah ee booqdayaasha.
Nov 13, 2014 at 2: 26 AM
Jeanne Sachs (@suumaaa)
Nov 17, 2014 saacadu markay tahay 7:07 PM
Maqaal weyn Ian. Dabcan sidoo kale waxaan rabaa inaan ku daro fahamka dhagaystayaashaada iyo qorista waxyaabaha la jaan qaadaya baahiyaha dhagaystayaashaada ayaa muhiim u ah guusha!